Zimbabwe coalition aims to tackle agricultural crisis
Home > Zimbabwe coalition aims to tackle agricultural crisis
A new campaign initiative backed by a coalition of global partners is raising money to provide agricultural training for 90,000 farmers in Zimbabwe.
A new campaign initiative backed by the Evangelical Alliance UK and a coalition of global partners is raising money to provide urgently needed agricultural training for 90,000 farmers in Zimbabwe. The aim is to feed up to 5 million people over three years.
According to the United Nations, Zimbabwe still needs emergency food aid for 1.7 million people in 2010 alone, despite better harvests earlier in the year.
Christians in the UK and around the world, along with some of the four million exiled Zimbabweans, are committing to join the prayers and action of local churches inside the country as part of the initiative.
The coalition movement, LoveZim, wants to help improve the lives of Zimbabwean farmers and break the cycles of poverty and dependency they are being subjected to in conditions of national political and economic instability.
“This is a call for all Christians in the UK, in Africa and across the world to participate in prayer and action that can change Zimbabwe forever," commented the Rev Levy Moyo of the Council of Zimbabwe Christian leaders UK.
Source URL: http://www.ekklesia.co.uk/node/12983